दिप्ताकाे ‘यो जिन्दगी’ – bampijhyala.com
Home > भिडियो > दिप्ताकाे ‘यो जिन्दगी’
१६ मंसिर २०७७, मंगलवार १०:४६ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । बेलायत निवासी दिप्ता थापाको स्वर रहेको गीत ‘यो जिन्दगी’ सार्वजनिक भएको छ। म्युजिक भिडियोसमेत बनेको गीत बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी ‘दुबसु’ ले एक समारोहबीच सार्वजनिक गरेका हुन्।
शिखर सन्तोषको संगीत रहेको गीतमा सञ्जित देउजाको शब्द छ। गीतको भिडियोमा पनि गायिका दिप्ता नै देखिएकी छन्। यसको कोरियोग्राफी उनकै आमा सुनिता गौतमले गरेकी छन्।
भिडियोमा छायांकन, सम्पादन र निर्देशन कुशल श्रेष्ठको रहेको छ। गीत र भिडियोले प्रवासमा हुर्किएका नयाँ पुस्तालाई नेपाली गीतसंगीतमा लाग्न साथै कला, संस्कृतिको संरक्षण गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास आफूले लिएको दिप्ताले बताइन्।
२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १४:०० bampijhyala 0
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । अचेल युट्युब गीतसङ्गीतका लागि राम्रो आम्दानीको...
प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै १६ मंसिर २०७७, मंगलवार १०:४६
अर्जेन्टिना र चिलीले बराबरी १६ मंसिर २०७७, मंगलवार १०:४६
विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र आजदेखि शुरु १६ मंसिर २०७७, मंगलवार १०:४६
काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा कति खुकुलो ? कति कराई ? १६ मंसिर २०७७, मंगलवार १०:४६
हजुरको आजको दिन, ०७८ असार १ गते, मंगलवार, १५ जुन २०२१। १६ मंसिर २०७७, मंगलवार १०:४६